प्रधानमन्त्री, बेसार र आयुर्वेद – Chitwan Post
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् र अन्य विभिन्न कार्यक्रममा समेत नेपालीहरुको भान्सामा उपयोग हुने बेसार, अदुवा, मेथी आदिले मानिसमा रोगप्रतिरोध क्षमता बढाउने भएकाले नेपालीलाई कोरोनाको प्रभाव नरहने बताएपछि यसको निकै आलोचना भयो । बेसार दलेर, बेसारमाथि कटाक्ष गर्दै लेख र साहित्यिक सिर्जना गरेर पनि आलोचना गरियो । स्वयं प्रमले नै बेसारको मजाक नउडाउन आग्रह गर्नुपर्‍यो ।
हो, पात्र र प्रवृत्तिमाथि कटाक्ष गरिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर बेसार, अदुवा, मरीच, धनियाँ, मेथी, लसुनजस्ता अमोघ प्राकृत औषधिमाथि कटाक्ष गरिनु सान्दर्भिक लाग्दैन । व्यक्ति र व्यक्तिको शैलीलाई होच्याइरहँदा अमोघ औषधि नै घृणा र अवहेलनाको शिकार भइरहेको अनुभूति गर्न थालिएको छ अहिले । बेसार हरेक तरकारीमा प्रयोग हुन्छ, बेसार हरेक वैवाहिक कर्ममा सगुनस्वरुप दुलहीहरुले लाउने गर्छन्, बेसार सर्दी र रूघाखोकी लाग्दा तातो पानीसँग सेवन गरे छिट्टै राहत मिल्छ । बोका या गोरूलाई खसी पार्दा अण्डकोषको अप्रेसनपछि मियाँहरुले बेसारलाई तोरीको तेलले भिजाएर काटेको ठाउँमा लपक्क दलिदिने गर्थे । जसले काटेको घाउमा बिनाइन्फेक्सन छिट्टै घाउ निको हुन्थ्यो र खसी पारिएका बोका, बहरहरु तङ्ग्रिहाल्थे । यसर्थ, बेसार बहुपयोगी थियो र छ अहिले पनि । तर, यति अमोघ औषधमाथि नै बेसारकै निन्दा हुनु र गरिनुचाहिँ अस्वाभाविक लाग्छ । यसले कदाचित हाम्रा अश्विनीकुमारदेखि ऋषिमहर्षिहरुको खोज र प्राप्तिहरुमा समेत गहिरो आघात पर्ने देखिन्छ ।
हो, अहिले आधुनिक युग हो र यहाँ विज्ञान र प्रविधिले प्रमाणित गरिएको वस्तुमा मात्र विश्वास गर्ने र रुपमाथि विश्वास नै नगर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘हुन्छ लाऊ, खाऊ भन्यो भने लाउने र खाने’ जमाना हो । प्राच्य महर्षिहरुले अनुसन्धान गरेर उपभोग गर्न सिफारिस गरेको औषधमाथि यति ठूलो कटाक्ष सह्य हुने देखिन्न । किन पनि भने यो हजारौँ वर्षअघिदेखि नै जन्मिएको प्राचीनकालीन चिकित्सा विज्ञानको उपज हो । जसलाई आयुर्वेदका नाउँले बुभ्mने गरिएको छ अहिले पनि ।
अथर्ववेदको उपवेद नै आयुर्वेद हो र यसले मानिसको शारीरिकमात्रै नभएर मानसिक स्वस्थताका उपायहरु सिकाउँछ । यतिमात्रै कहाँ हो र ? मानवजीवनसँग जोडिएका खानपान र आहारविहारलाई पनि निकै वैज्ञानिक हिसाबले नै यसले निर्दिष्ट गरेको छ । यसले मान्छेको शरीर, मन, बुद्धि, चेतना र आत्मालाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्नमा विशेष निर्देश गरेको छ । यसैले पनि आयुर्वेदलाई खाद्य संस्कृति र जीवन पद्धतिको एउटा मह¤वपूर्ण सार मानिन्छ ।
किन पनि भने मानिसले जस्तो अन्न, जल सेवन गर्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शरीरमा पर्छ । स्वस्थकर अन्न, जलले शरीर स्वस्थ रहन्छ । जब शरीर स्वस्थ रहन्छ तबमात्रै मानिसमा स्वस्थ विचार, चिन्तन र सकारात्मक सोच पैदा हुन्छ । शरीर तेजिलो, फुर्तिलो र ऊर्जावान् शरीर भएमा नै आप्mनो शरीर ज्ञान, चेतना, बुद्धि, कला आदि इत्यादि क्षमताअनुरुप काम गर्ने जोश, जाँगर र हौसला उद्दीप्त बन्छ । गरिष्ठ र अस्वस्थकर आहारले चित्त शुद्धि त के शरीर शुद्धि पनि रहन सक्तैन । यसर्थ, शरीरमाद्यं खलु धर्म (कर्म) साधनम् भनिएको हो । अर्थात् ज्ञानविज्ञान वा शारीरिक वा मानसिक, बौद्धिक वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिको कार्य सफलरुपमा सम्पादन गर्न शरीरको स्वस्थतामाथि विशेष जोड दिइएको देखिन्छ । खानपानमा पनि सम्भव भएसम्म सन्तुलित आहारमाथि जोड दिइएको छ ।
अझ आहारसँगै योग र ध्यानलाई पनि सँगै जोडेर यसले मानिसको स्वजीवन र यसको सार बुभ्mन अभिप्रेरित गरेको पनि छ । वात, पित्त र कफजन्य त्रिदोष नै प्राणीमा लाग्ने रोग हुन् । यस्ता रोगबाट बच्न र सदा आरोग्य प्राप्त गर्न अपनाइने अनेकौँ विधि र उपायहरुमध्ये योग, पञ्चकर्म, क्षारसूत्र, अमोघ जडीबुटी र आहारलाई यसमा विशेष जोड दिइएको छ । नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम र ध्यान आयुर्वेद उपचार पद्धतिका अपरिहार्य अङ्गभित्र पर्दछन् । योगले मन अर्थात् चेतन त¤व र शरीर अर्थात् जडत¤वलाई परस्पर जोड्छ । चित्तका अनेकौँ त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिताप आदियुक्त गुणहरुबाट निरोध गरी सूक्ष्म शरीर हुँदै ब्रह्मत¤वसँग जोड्नमा पनि योगको अपरिहार्य भूमिका रहन्छ । यसरी अनेकौँ ताप, चिन्ता र तनावहरुबाट सन्तप्त मानिसहरु छन्, यसर्थ योगलाई आयुर्वेदले मानवजीवनको सर्वाङ्गीण स्वस्थताका निम्ति अनिवार्य सर्त मानेको तथ्य सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
यसर्थ, संस्कृत र पूर्वीय संस्कृति र जीवनदर्शन अहिले पच्छिमाहरुका निम्ति अनुकरणीय बन्दै गएको त छँदैछ, अझ योग त उनीहरुका निम्ति पनि अपरिहार्य अङ्ग बनेको तथ्य घामझैँ छर्लङ्गै छ । यसैले, योगलाई अहिले पूर्वीय जगत्मा मात्र नभएर सिङ्गो विश्वले अङ्गीकार गरिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सन् १९१५ बाट जुन २१ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको मान्यता दिई हरेक वर्ष भव्यरुपमा योग दिवस मनाउँदै आएको तथ्य यहाँ भुल्नु अन्याय हुन सक्तछ । नेपाल स्वयंले पनि योगलाई उच्च मह¤व दिई माघ १ गतेका दिनलाई योग दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्नुका साथै कार्यक्रम पनि भव्यरुपमा मनाउने गर्दै आएको छ ।
क्षारसूत्र र जडीबुटीहरु त झन् चिकित्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएका पक्ष भए नै । त्यसमा पनि जडीबुडी जुन वन्यवनस्पतिदेखि हाम्रा घरआँगनहरुमा पाइने झारपात सबै नै धेरैदेखि थोरैमा पनि केही न केही औषधीय गुणयुक्त हुन्छन् भन्ने तथ्य आयुर्वेदसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरुको अध्ययन, अवलोकन र त्यसको व्यावहारिकरुपमा प्रयोग गर्दा स्वतः प्रमाण मिल्छ । त्यसैले, पूर्वजले त्यस्ता अमोघ द्रवहरुमध्ये पनि अत्यन्त अपरिहार्य वस्तुलाई हाम्रो भात र भान्सामा जोडेर सबल र निरूग्ण तुल्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तुलसी, कुश, बर, पीपल आदि वृक्ष रोप्न र जल चढाउन आग्रह र निर्देश गर्नुमा पनि यही सत्य लुकेको सहजै मिल्दछ ।
जहाँसम्म कोभिड–१९ बाट बच्न नमस्कार गर्नेदेखि रोगप्रतिरोध क्षमता बढाउन कोरिया, कतार दुबई, जापान आदि देशदेखि युरोपियन र अमेरिकाहरुमा समेत बेसार, कागती, लसुन, अदुवा, ज्वानो, मेथी, जिरा आदि वस्तु उपभोग गर्न थालेको बुझिएको छ । यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपूmले अध्ययन गरेर प्रमाणित गरिनसकेकाले यसबाट कोरोना लाग्नै नदिनेदेखि कोराना सञ्चो हुने प्रमाणित नभएकाले भ्रममा नपर्न पटकपटक अपिल गरेको छ । तर, आयुर्वेदको अध्ययन, अनुसन्धान र औषध निर्माणमा जुटिरहेको भारतीय पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारले कोरोना निको पार्ने औषधि निर्माण गरिसकेको दाबी गरेको छ । तर, सँगसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुदान वा अन्य कुनै कारणले पनि हुन सक्छ भारत सरकारले पतञ्जलिद्वारा उत्पादित औषधि बिक्रीवितरणमा बन्देज लगाएको छ ।
अङ्ग्रेजी उपचार पद्धति र औषधिको चङ्गुलमा फसिसकेको विश्व अहिले अन्य उपचार पद्धतिप्रति सहिष्णु त छैन नै, रुपद्वारा उत्पादित औषधिप्रति अविश्वासको गहिरो खाडल निर्माण गरिदिएको पनि उत्तिकै छ । धेरैलाई जडीबुटीको सही मात्रा र पथ्यले सञ्चो गर्छ भने पनि यमलोकको यात्रा तय गर्न पनि सक्छ भनिएको छ । तथापि, यी जडीबुटीले कतिपय दीर्घरोग निको तुल्याउन लामो समय लाग्न सक्छ र यदाकदा काम नगर्न पनि सक्ला, तर तिनले प्रायः साइड इफेक्ट गर्दैनन् भन्ने आयुर्वेदज्ञको कथन छ ।
जहाँसम्म अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, फ्रान्स, इटालीजस्ता देशहरु र हाम्रो मुलुक तथा छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण र मृत्युदरलाई हेरिरहँदा हामीले दैनिक भातभान्सामा उपभोग गर्ने गरेका बेसार, लसुन, अदुवा, ज्वानो, मेथी, जिरा, धनियाँ, ल्वाङ, सुकमेल, कागती आदि इत्यादिमा रोगप्रतिरोध क्षमता बढाउने क्षमता उच्च दरमा रहेको भन्न करै लाग्छ । यस स्थितिमा सरकारप्रमुखले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन र आयुर्वेदीय तथ्यलाई सार्वजनिक गरिरहँदा बेसारको उछितो काढ्नु त्यति शोभादायक लाग्दैन ।
हो, संसद्मा उनको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति भनौँ या पूर्णविश्वस्त भई भनिएको त्यो कथनमा आपत्ति जनाउन सकिन्छ । क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्नु, त्यहीँ आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आउनु, असुरक्षित रहनुपर्ने, बलात्कृत हुनु आरडिटी गराउँदै घर पठाउनु, आइसोलेसनको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्नु, पिसिआर मेसिन खरिद गरेर ल्याउने र स्वाब परीक्षण क्षमता बढाएर रोग लागेकालाई छिट्टै घर पठाइहाल्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु जस्ता कमीकमजोरी प्रशस्त छन् । त्यसको रिस र आवेग बेसारमाथि खन्याउने सोच र तरिका भने अनुत्पादक लाग्छ । बेसारहरुप्रतिको घृणा यसरी व्यक्त गरियो कि मानौँ अब हामी बेसार आदि उपभोग गर्न त के हेर्दा पनि हेर्ने छैनौँ भनेजसरी विषय प्रस्तुत गर्नु स्तुत्य देखिन्न । बरू, आयुर्वेदका अनुसन्धानपूर्ण खोज र आविष्कारहरु अहिले विकसित देशका निम्ति ग्राह्य बनिरहेको अवस्थामा हामीकहाँ यसप्रति घृणा र नकारात्मकता त्यति पाच्य देखिन्न । बरू, हामी सबै यसका नवीनतम संस्करणहरु विश्व बजारमा ल्याएर विश्व मानव कल्याणमा उपयोग गर्न जुट्नु जरूरी देखिन्छ । हानिरहित यस्ता अमोघ औषधहरुलाई अमूक वर्ग, जाति र समुदायको मात्र ठान्ने प्रवृत्तिबाट शिकार बन्न नदिई यसलाई विश्व मानव कल्याणका निम्ति विकास र विस्तार गरी निरोगी संसार बनाउने कार्यमा योगदान पु¥याउन जुट्नु नै हामी सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ ।
कोरोना प्रभावित किसानलाई व्याजमा छूट दिने निर्णय
बिहान दिनदिनै किन नुहाउने ? (संस्कार चिन्तन)
पुलबाट हाम फालेकी युवतीको १२ घन्टापछि उद्धार
दस दिनको कोरोना परीक्षण : चितवनमा शून्य संक्रमण
नहर अतिक्रमण : घर र सडक डुबानमा